Fiatrehana ny valanaretina: mahazaka marary 120 ny CTC19 eny Andoharanofotsy | NewsMada
Fiatrehana ny valanaretina: mahazaka marary 120 ny CTC19 eny Andoharanofotsy
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny CTC19 etsy amin’ny ISTS Andoharanofotsy. Mahazaka marary hatramin’ny 120 ity toerana ity ary natao hitsinjovana manokana ireo mararin’ny coronavirus eny Atsimondrano.
Mivangongo amin’ny boriborintany enina ny CTC hany ka sahirana ireo avy amin’ny kaominina manodidina mikarakara ny marariny. Izany indrindra no hanitarana ny CTC toy ity eny Andoharanofotsy ity.
Iarahana miasa amin’ny masera, izay mitantana ny toerana ny fandrasaina ny marary eny amin’ity CTC ity. Manodidina ny 120 ireo mpiasan’ny fahasalamana mampihodina ny toeram-pitsaboana. Misy ny fandaminana manokana ny asan’izy ireo amin’ny fiandrasan-draharaha. Hisitraka tambin-karama manokana izy ireo ao anatin’izao ady amin’ny valanaretina izao, raha ny fanazavana hatrany.
Efa manana tavoahangin’oxygène ampolony ihany koa ny CTC19 vaovao eny Andoharanofotsy handraisana ireo marary sempotra sy mila izany.
CTC 3 hafa
Nosokafana, omaly ny CTC vaovao any amin’ireo faritra ahitana ny firongatry ny aretina toy ny ao Vakinankaratra , Matsiatra Ambony ary Anosy.
Handray ireo marary izy ireny ary hifarimbona ireo dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana any an-toerana hanavotra ny ain’ny marary.
Nosokafana ihany koa ireo hotel hopitaly hanampy hatrany ny fandraisana marary ary vao omaly no nosokafana ny teny amin’ny Panorama Andrainarivo.
Nilaza ny Filoham-pirenena, nandritra ny tatitra natao ny alahady teo fa efa mihamalalaka ny CTC19 amin’izao fotoana; Manaporofo izany fa efa betsaka ny sitrana ary mihena ny olona marary sy mitondra ny tsimokaretina ankehitriny.